Imivuzo Yokunyaniseka | Martech Zone
Xa ndisebenza kwiphephandaba, bendihlala ndiziva ngathi senza izinto ngasemva. Sinike iiveki ezininzi zasimahla zephephandaba kuye nawuphi na umntu obhalisileyo. Besinababhalisi abaye bahlawula ixabiso elipheleleyo iminyaka engamashumi amabini kunye kunye kwaye zange bafumane isaphulelo okanye umyalezo wokubulela… kodwa singamnika umntu ongathobeli uphawu lwethu ngomvuzo okhawulezileyo. Kwakungekho ngqiqweni.
Zeziphi izibonelelo ezizivunayo zokukhuthaza ukuthembeka kwabathengi bayo? Kwaye kuthatha ntoni ukukhuthaza ukunyaniseka? Imivuzo iyanceda ngokuqinisekileyo, kodwa kubaluleke ngakumbi ukugxila kwizinto ezinje ngokubonelela ngemveliso enkulu okanye inkonzo, kunye nokwaziwa ngokuba nenkonzo yabathengi ephezulu. I-infographic yakamuva yeZendesk, Ukunyaniseka Imivuzo, ibonisa ukunyaniseka kwabathengi kubaluleke kakhulu. I-78% yabathengi abathembekileyo banceda ekusasazeni igama malunga negama lakho, kwaye iipesenti ezingama-54 ngekhe ziqwalasele ukutshintshela kukhuphiswano.
tags: ukunyaniseka kwabathengiumvuzo wabathengiukunyanisekaIinkqubo zokunyanisekaIinkqubo zomvuzoumvuzo
Inkcazo-ntetho: Ungawongamela njani uMnyhadala wakho